အဘယ်မှာရှိဂျာမဏီခုနှစ်တွင်လက်ဝဲခရီးဆောင်သေတ္တာတည်နေရာကိုရှာပါရန်? | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အဘယ်မှာရှိဂျာမဏီခုနှစ်တွင်လက်ဝဲခရီးဆောင်သေတ္တာတည်နေရာကိုရှာပါရန်?
နယ်လှည့်အဆုံးစွန်စွန့်စားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဒါပေမယ့်သင်ကလုပျသငျ့အိတ်အခမဲ့, အထူးသဖြင့် layovers ဘို့ဒါမှမဟုတ်သင်ရုံဂျာမဏီရဲ့တဦးတည်းအတွက်အခမဲ့တစ်ရက်ရှိပါက လူကြိုက်များမြို့ကြီးများ. ကျနော်တို့က၎င်း၏အဓိကမြို့ကြီးများ၏သုံးဘို့သင့်ကိုဂျာမနီရှိလက်ဝဲအိတ်တည်နေရာများအတွက်လိုအပ်သမျှအချက်အလက်တွေကိုရှိ, ဘာလင်, မြူးနစ်, နှင့်ဟမ်းဘတ်.
သငျသညျမြားတကျရောကျနေပဲဖြစ်ဖြစ် မြူးနစ်အတွက် Oktoberfest, ဘာလင် Brandenburg အမည်ရှိသတို့သားကတံခါးဝကိုကွောကျရှံ့၌စိုက်နေသည်ကိုသို့မဟုတ်ဟမ်းဘတ်အတွက် Reeperbahn ၏ပါတီ Vibe အတွက် reveling, ထိုအသငျသညျစူးစမ်းလေ့လာနေချိန်မှာသင့်ရဲ့အိတ်ကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းသေချာစေရန်အလွယ်ကူဆုံးနှင့်အအရှိဆုံးအဆင်ပြေနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်.
Tegel မှာ လေဆိပ်, သငျသညျ Terminal နှင့်တစ်ဦးမှာလက်ဝဲအိတ်တည်နေရာကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်, သူတို့ကနေနေ့တိုင်းဖွင့်လှစ်ထားပါသည်5နံနက်မှ 10:30 ညနေ. သငျသညျပေးဆောင်မည်စျေးနှုန်းများအနေဖြင့်ကွဲပြားပါလိမ့်မယ်€ 7.20 9,90 နှင့်သင့်အိတ်ရဲ့အရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပါသည်€မှ. သိုလှောင်မှုအတွက်အချိန်ရဲ့အရှည်န့်အသတ်ဖြစ်ပါသည်.
မှာ Schonefeld လေဆိပ်, သငျသညျ Terminal နှင့် D ကိုဆိုက်ရောက်ဗီဇာမှာလက်ဝဲအိတ်တည်နေရာကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်. သူတို့ရဲ့နာရီသောကြာနေ့မှတနင်္ဂနွေများမှာ, မှ 7:30 နံနက်မှ 11:30 ညနေနှင့်စနေနေ့ကနေ 8 နံနက်မှ6ညနေ. အဆိုပါစျေးနှုန်းများပုံမှန် check လုပ်ထားအိတ်များအတွက်€ 10 လက်အိတ်နှင့်€74 €ထံမှ6€အထိ.
၏အဆင်ပြေစေရန် မီးရထားဘူတာ သင်တို့အဘို့ထိုသူတို့ပွင့်လင်းဖြစ်ပါတယ် 24 နာရီတစ်ရက်, ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးတစ်ပါတ်. ဗဟိုရထားဘူတာ (Hauptbahnhof) သငျသညျ Locker တွေရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်နယ်မြေကို C အတွက်အဓိကအဆောက်အဦးအပြင်ဘက်ကားပန်းခြံတွင်တည်ရှိသည်သည်အဘယ်မှာရှိ.
သင်လိုအပ်သည့် Locker ၏အရွယ်အစားပေါ် မူတည်., သူတို့တစ်တွေတစ်နေ့တာ€4နှင့်€6အကြားကုန်ကျနှင့်အများဆုံးသိုလှောင်မှုကာလဖြစ်ပါသည် 72 နာရီ. သင်တစ်ဦးဘယ်ဖက်အိတ်ရုံးသွားရောက်လည်ပတ် Preferences အကယ်., တဦးတည်းအနေဖြင့်နေ့စဉ်အဲဒီမှာဖွင့်လှစ်တာဖြစ်ပါတယ်6နံနက်မှ 10 ညနေနှင့်ကို item နှုန်းက၎င်း၏အကြောင်းကို€ 5.
Locker သိုလှောင်မှုနဲ့အတူအခြားအဘူတာ Alexanderplatz ပါဝင်သည်, Ostbahnhof, Potsdamer Platz နှင့် Zoologischer ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး. ဂျာမနီမှာလက်ဝဲအိတ်တည်နေရာကိုရှာဖွေရလွယ်ကူ!
မြူးနစ်လေဆိပ်တွင် သငျသညျထိုမွို့သွားရောက်လည်ပတ်ကြသောအခါအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်. Terminal နှင့်မှာဝန်ဆောင်မှုစင်တာမှ 1 ပွင့်လင်းဖြစ်ပါတယ် 24 နာရီနှင့် Terminal နှင့်အချိန်တစ်စက္ကန့်တည်နေရာလည်းမရှိ2ဒါပေမဲ့အဖွင့်နာရီမှ5နေ့စဉ်သန်းခေါင်မှဖြစ်ကြောင်းကို.
သငျသညျ€5နှင့်€ 10 အကြားပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်, သင်၏အိတ်၏အရွယ်အစားအဖြစ်သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပေါ် မူတည်.. အဆိုပါလေဆိပ် Check’ website ကိုသင်နောက်ဆုံးရအချက်အလက်များနှင့်ဂျာမနီမှာလက်ဝဲအိတ်နေရာများတွင်အခြားလေဆိပ်များအတွက်သွားလာမတိုင်မီ.
မြူးနစ်ရဲ့ဗဟိုစခန်းအိတ်သိုလှောင်သင်တို့အဘို့တစ်ဦးလေပြေဖြစ်လိမ့်မည်. Locker တွေအနေနဲ့များစွာသောရှိပါသည်နဲ့အလွယ်တကူသူတို့ကိုနေရာချထားဖို့အရိပ်လက္ခဏာရှိပါတယ်. တစ်ဦးကစံ Locker တစ်နေ့လျှင်€4အကြောင်းအရာကိုသင်တို့ကုန်ကျနှင့်ပိုကြီးတဲ့အဘို့အဦးမည်, နေ့စဉ်€6အကြောင်းကိုဝတ်စုံကို-ကိစ္စတွင်အရွယ် Locker. တစ်ဦး 72 နာရီကန့်သတ်ကန့်သတ်သို့သော်ရှိပါတယ်.
သင့်ရဲ့တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာသည် ဟမ်းဘတ်လေဆိပ်. အဆိုပါလက်ဝဲခရီးဆောင်သေတ္တာရုံး Terminal နှင့်မှာဖြစ်ပါတယ် 2, level 1 ထွက်ခွာနှင့်ကနေတနင်္ဂနွေမှတနင်္လာနေ့ပွင့်လင်းရဲ့ 4:30 နံနက်မှ 11 ညနေ. သငျသညျ€5နှင့်€ 25 အကြားပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်, အရွယ်အစားပေါ်မှာရှိသမျှမှီခို. အဆိုပါပိုကြီးတဲ့သင့်ရဲ့အိတ်, သင့်ရဲ့ကြေးမြင့်မား, နှင့်လေဆိပ်ကိုလည်းကို item နှုန်းတစ်ဦးတည်းအချိန်အပြောင်းအလဲနဲ့အခကြေးငွေအဖြစ်€3ပညတ်.
ဥရောပတိုက်တွင်ရထားဘူတာအများအပြားနှင့်အတူအမျှ, သင်တို့ရှိသမျှသည်အလွယ်တကူဖြစ်ကြပြီးပွင့်လင်းသော Locker တွေနှင့်အတူကံ၌ရှိကြ၏ 24 နာရီတစ်ရက်. ပျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ်€5နေ့ဖြစ်၏နှင့်မျှမအရွယ်အစားကန့်သတ်ချက်ရှိပါတယ်.
ပုဂ္ဂလိကန်ဆောင်မှုများ: ခရီးဆောင်သေတ္တာသည် '' Airbnb ''
Airbnb ၏ရန်အလုပ်စနစ်တစ်ခုအလွန်ဆင်တူအနည်းငယ်ကုမ္ပဏီများမှရှိပါတယ်, အိတ်သာ. သင်သာတစ်ဦး၏တည်နေရာကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်ပါတယ်, ကြိုတင်စာရင်းလုပ်ပြီးတော့သင်တို့အဘို့အရှိဆုံးအဆင်ပြေသော certified ရရှိထားပြီးတည်နေရာမှာသင့်အိတ်စွန့်ခွာ. ဒါဟာဂျာမနီမှာလက်ဝဲအိတ်တည်နေရာများကိုရှာဖွေတာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်း.
ဤသည်အသုံးပြုရလွယ်ကူကြောင်းဟာအလွန်ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့သိုလှောင်မှုဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အတော်လေးကျိုးကြောင်းဆီလျော်စျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျတစ်နေ့လျှင်တစ်အိတ်လျှင်€5ပြားချပ်ချပ်နှုန်းကိုပေးချေမည်. သင့်ရဲ့အိတ်ကိုလည်း 800 €ကျော်ဘို့အာမခံထားဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာအားလုံးစျေးနှုန်းတွင်ထည့်သွင်းဖွင့်.
သငျသညျရိုးရှင်းစွာသင်အနီးရှိတည်နေရာကသူတို့ရဲ့ website သို့ရှာဖွေ. သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သင်၏အသတ်သတ်မှတ်မှတ် '' StashPoint 'နှင့်သောအခါအသင်သည်သင်၏အိတ်ချွတ် drop ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါလိမ့်မည်, သင့်ရဲ့အိမ်ရှင်သင့်ရဲ့ကြိုတင်မှာကြားထားပြသငျသညျခွဲထားခဲ့သည်နေ!
ဤအလားတူန်ဆောင်မှု Nannybag နှင့် BagBnb ပါဝင်သည်. ဤဝန်ဆောင်မှုများအမှန်တကယ်ဥရောပတစ်လျှောက်လုံးရရှိနိုင်ပါသည်နဲ့အလွယ်တကူဂျာမဏီအတှကျအသုံးပွုနိုငျသညျ.
ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်သိုလှောင်သည့်အခါအိတ်လိုအပျ, ဒါကြောင့်ကိုပြင်ဆင်စေခြင်းငှါအစဉ်အမြဲအကောင်းဆုံးင်. နှစ်ချက်လုံးကိုအသေးစိတျစစျဆေးနှင့်သင်သွားကြသည်တစ်သင်တို့အဘို့အဆင်ပြေကြောင်းဖြေရှင်းချက်အဘယ်မှာရှာတွေ့. လေဆိပ်ရဲ့ရှိမရှိ, မီးရထားဘူတာသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း nifty ပုဂ္ဂလိကဝန်ဆောင်မှုများကိုထွက်စစ်ဆေးနေ, ကခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံမှာအားလုံးရရှိနိုင်မယ့်. မင်္ဂလာအိတ်နှင့်သင့်မီးရထားလက်မှတ်နှင့်အသုံးပြုမှုအပေါ်အချို့သောပိုက်ဆံကယ်တင် တစ်ဦးကရထား Save!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “အဘယ်မှာရှိဂျာမဏီခုနှစ်တွင်လက်ဝဲခရီးဆောင်သေတ္တာတည်နေရာကိုရှာပါရန်?” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/left-luggage-locations-germany/ ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
leftluggage မြူးနစ် trainjourney Tranride ဘူတာရုံ ရထားခရီးသွား travelberlin travelgermany travelhamburg